Helitaanka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Informationsverige.se - Ku hagaha bulshada Iswiidhan / Ku saabsan boggan intarnat-ka / Helitaanka
Waxaanu doonaynaa in dadka ugu badan ee suurtagal ah ay awoodaan inay isticmaalaan Informationsverige.se Boggan wuxuu sharaxayaa sida boggan intarnatka u buuxinayo sharciga ku saabsan helitaanka adeeg dadweyne oo dijitaal ah, wixii dhibaatooyin ah dhanka helitaanka iyo sida aad adigu noogu soo sheegi kartid wixii gabaabsiyo ah si aanu u hagaajino.
Waa sidee helitaanka boggan intarnatka?
Boggan intarnatka wuxuu qayb ahaan waafaqsanyahay sharciga helitaanka adeeg dadweyne oo dijitaal ah.
Maxaad samayn kartaa haddii aanad isticmaali karin qaybo ka mid ah boggan intarnatka?
Haddii aad macluumaad uga baahantahay Informationsverige.se iyadoo ah qaab kale oo aan ahayn ka ku jira boggan intarnatka maanta markaas waad nala soo xiriiri kartaa oo codsan kartaa in lagu siiyo nuxurka oo qaab kale ah. Wakhtiga jawaabta caadi ahaan waa 2 ilaa 3 maalmood oo shaqo.
Xiriirka ii-maylka: Codso nuxurka oo ku jira qaab kale
Sheegida gabaabsiyada ku jira boggan intarnatka helitaankeeda
Waxaanu ku dadaalnaa goor kasta inaanu fiicnaysiino helitaanka boggan intarnatka. Haddii aad hesho dhibaato aan lagu sharraxin boggan, ama haddii aad u aragto in anagu aanan buuxin shuruudaha sharcigan, markaas waa/waxaad awoodaa inaad noo soo sheegto si aanu u ogaano dhibaatada jirta.
Xiriirka ii-maylka: Sheegida gabaabsiyada dhanka helitaanka
Waxaad xitaa halkan ku codsan kartaa waxa ku jira ama ku soo sheegi kartaa gabaabsiyada:
Telafoon: 010-224 40 00 (sheeg in informationsverige.se tahay mawduuca)
Hey'adda dawladeed ee maamulka dijitaalka (DIGG) ayaa mas'uul ka ah ka warhaynta dhanka sharciga helitaanka adeega dadweynaha ee dijitaalka ah. Haddii aanad ku qanacsanayn sida aanu u maarayno aragtiiyahaaga waxaad la xiriiri kartaa DIGG oo u sheegi kartaa arrintan.
La xiriir hey’adda dawladeed ee maamulka dijitaalka (DIGG)
Macluumaad farsamo oo ku saabsan boggan intarnatka helitaankiisa
Boggan intarnatka wuxuu waafaqsanyahay heerka AA Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
Nuxurka aan la helayn waxaaa lagu sharaxay halkan:
Qaar ka mid ah pdf-yadii gaboobay ma waafaqsana helitaankan. Waxaanu hagaajin doonaa kolba marka aanu waafajino helitaankooda.
Gabayga "Nagala hadla wixi ku saabsan carruurta" kuna qoran bogga "Metodstöd: Carruurta xuquuqdooda iyo horumarkooda" waxay ku jirtaa sawir, oo sidaas awgeed maaha suurtagal in loo isticmaalo sidii qoraal.
Boggan intarnatka adeegiisa akhrinta ma kugu taageerayo luqadaha af Soomaaliga iyo af Tigrinya.
Informationsverige.se laga bilaabo Janaayo 2021 ma sii taageeri doono isticmaalka Internet Explorer oo ma awoodo inuu damaanad qaado inay si fiican u shaqayso wakhtiga ka dambeeya. Waxaanu ku talinaynaa in la isticmaalo Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox ama Microsoft Edge.
Sidan ayaanu u tijaabinay boggan intarnatka
Tifatirayaashayada takhasuska ku ah helitaanka bogga intarnatka ayaa hubiyay oo tijaabiyay boggan intarnatka. Tijaabinta iyo baaritaanka kediska ah waxaa loo sameeyaa si isdaba joog ah, dhowr mar bishiiba.
Waxaanu xitaa ka shaqaynaa hubinta iyo sii fiicnaysiinta boggan intarnatka iyadoo la adeegsado caawimaada Siteimprove iyo Google Analytics.
Boggan intarnatka waxaa la daabacay 24 Oktoobar 2018.
Warbixintan waxaa la cusboonaysiiyay 20-kii Diisambar 2021.